यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी ! – Khabaarpati
November 18, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी !
शुक्रबार : शुक्रबार जन्मेका व्यक्तिको मन, दिमाग र शरिर निकै राम्रो हुने गर्दछ । यस दिन जन्मिले व्यक्तिहरु निकै रोमान्चक स्वभावका हुन्छ। उनीहरुको मिठो स्वरले सबैको मन जित्न सफल हुनेगर्छन। यस बर जन्मिने व्यक्तिहरुलाई २० र २४ वर्षको उमेर मा दुख कष्ट पर्ने भएपनि आफ्नो कडा मेहेनत र परिश्रमको बावजुद प्रशस्त धन आर्जन गर्न सक्छन। शुक्रबार जन्म भएका व्यक्तिहरुले गरेका हरेक कामको नतिजा ढिलो आउने भएपनि सकारात्मक हुने गर्छ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **